အစိုးရဗီဒီယိုပြပွဲတွင်ဖိုင်အခြေပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကို Telestream မှပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Telestream အစိုးရဗီဒီယိုကုန်စည်ပြပွဲမှာဖိုင်မှတ်တမ်း-based လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
Telestream အစိုးရဗီဒီယိုကုန်စည်ပြပွဲမှာဖိုင်မှတ်တမ်း-based လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
Telestream အစိုးရအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြေရှင်းချက်လွယ်ကူပြီး cost- ထိရောက်သောကဗီဒီယို transcoding, ဗီဒီယိုစာတန်းထိုး, ဗီဒီယိုရိုက်နိုင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်အဘို့ခွင့်ပြု
Telestream®, ယနေ့ကမှာတဲ 623 အတွက်၎င်း၏ဖိုင်-based မီဒီယာထုတ်ကုန်ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယို transcoding နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးကြေညာခဲ့သည် အစိုးရဗီဒီယိုကုန်စည်ပြပွဲ သောဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ Walter ဟာအီးဝါရှင်တန်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, ဒီဇင်ဘာလ 3rd နှင့် 4th 2014 မှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။
ယင်းမှဧည့်သည်များ Telestream တဲကုမ္ပဏီ၏တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် Vantage® အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု, multiscreen ပေးပို့နှင့် device ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတစ်ဦးလက်ကိုချွတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်, transcoding နှင့်ဖိုင်-based လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ပလက်ဖောင်း။ ရဝုဏ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌ run နိုင် - Vantage ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု-oriented ဗိသုကာတစ်ဦးစုစည်းသည့်စနစ်သို့ transcoding, မီဒီယာဖမ်းယူ, metadata ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့, analysis နှင့်အကြောင်းအရာစည်းဝေးပွဲကိုပေါင်းစပ်။ လုံခြုံစစ်တပ်ကွန်ရက်များပေါ်တွင် run ဖို့စမ်းသပ်ပြီး, Vantage ကိုလည်းအလိုအလျောက်ဖိုင်-based transcoding လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးခြေလှမ်းအဖြစ်အေးဆေးတည်ငြိမ်အက်ဥပဒေအသံကျယ်စောင့်ကြည့်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထောက်ခံပါတယ်။ Vantage ရဲ့အခမဲ့ SDK ကိုကာကွယ်ရေးနှင့်အစိုးရပေါင်းစည်းနောက်ထပ်ထုံးစံ applications များထဲသို့ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Telestream ထို့အပြင်၎င်း၏အသစ်ဗားရှင်းကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် စာတန်းထိုးဆော့ဖျဝဲ ထုတ်ကုန် MacCaption ™နှင့် CaptionMaker® ကြောင်းအလွယ်တကူနောက်ဆုံးပေါ် FCC သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အမေရိကန်မသန်မစွမ်းအက်ဥပဒေ (ADA) ၏အပိုင်း 508 လိုက်နာရန် automated ဖိုင်-based Vantage Workflows သို့ပေါင်းစည်း။ ပုဒ်မ 508 စည်းမျဉ်းများအများဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဆီကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့ (အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဖြန့်ဝေဘို့စာတန်းထိုးအပါအဝင်) တင်းကြပ်စာတန်းထိုးလိုအပ်ချက်များကို, ဆံ့။ အဆိုပါ ADA ဗီဒီယိုများအများပြည်သူနေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်နှင့်အားကစားကွင်းကဲ့သို့သောအခြားအများပြည်သူနေရာများအတွက်ကနားအာရုံနဲ့ Hard ဖို့လက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်သည်။ Telestream အလွယ်တကူစာရေးဆရာ, ပြင်ဆင်ရန်, အန်ကုက်လုပ်နဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံ, ကို web နှင့်မိုဘိုင်းပေးပို့ဘို့စာတန်းများနှင့်, စာတန်းထိုးပိတ်ထား repurpose တစ်ခုပြီးပြည့်စုံ software ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, ဖောက်သည်များကဗီဒီယိုကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့မှ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုစာတန်းထိုးပေးပို့ချောမွေ့နိုင်ပြီး3ပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်rd ပါတီစာတန်းထိုးကုမ္ပဏီများသည်။
Telestream တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အတွက် Wirecast 6.0၎င်း၏ရေပန်းစားတိုက်ရိုက်လွှင့် software များ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း။ အတွက် Wirecast တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံဆာဗာများနှင့်ပလက်ဖောင်းမှထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တိုက်ရိုက်စီး၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့် encoding က, ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့သာ Cross-platform, All-In-One တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များထုတ်လုပ်မှု software ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ကအစွမ်းထက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များ,်workflow နှင့်တိုးချဲ့အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ် options များနှင့်အတူအတွက် Wirecast 6.0 တစ်ဆော့ဖ်ဝဲ application များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်ပိုမိုစျေးကြီးဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်များ၏စွမ်းရည်များပေးထားပါတယ်။
ပွောငျးလဲ™, ကုမ္ပဏီအသစ် multiformat မီဒီယာပလေယာ, အစိုးရမီဒီယာပညာရှင်များများအတွက်မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သော MXF, AS-02 / ပီပီ 11-AS အဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး, HEVC ဖိုင်တွေနဲ့စာတန်းများကိုအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင် Format ကစားရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ, Switch သည်၎င်း၏အစွမ်းအစ၌အမှန်တကယ်ထူးခြား၏။ အခြေခံကစားသမားများနှင့်စစ်ဆေးရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်, ဖောက်သည်များသူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောပုံစံသို့မိမိတို့၏မီဒီယာ transcode ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, အဆင့်မြင့် application ကို-တိကျတဲ့ metadata ကိုကြည့်ရှု Pro ကို Switch, ဒါမှမဟုတ် parameters တွေကိုနှင့် metadata ပြုပြင်မွမ်းမံယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကို formats switching အပြင်, Switch လည်းထိုကဲ့သို့သော iTunes ကိုအဖြစ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းမှအကြောင်းအရာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ်။
Telestream : လည်းအပါအဝင်အစိုးရကုန်စည်ပြပွဲအတွင်းမှာအများအပြားအစည်းအဝေးများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်
"HEVC, MPEG-2 နှင့် H.264 Comparing"
ကြာသပတေးနေ့ဒီဇင်ဘာ 4th, 10-11 နံနက် - တွမ် Pflaum အားဖြင့်တင်ပြ, Telestream Solutions နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအရောင်းဒါရိုက်တာ
"မိတ်ဆက်ခြင်းကိုလွှ Live ဖို့"
ကြာသပတေးနေ့ဒီဇင်ဘာ 4th, 1: 00-2: 00 ညနေ - အင်ဒရူး Haley အားဖြင့်တင်ပြ, Telestream desktop Applications ကိုအထူးကု
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Telestream နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အလည်အပတ်ခရီး www.telestream.net.
Telestream စားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြတ်ပြီးကဗီဒီယိုအသွင်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို tools များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီအတော်များများကအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းအသုံးပြုသူကြီးထွားလာသောအရေအတွက်အပေါ်အားကိုး Telestream , စစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာကနေပိုပြီးဝင်ငွေကို generate မှထုတ်ကုန်။ Telestream ထုတ်ကုန်များအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း span ဗီဒီယိုရိုက် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်; အသက်ရှင် On-demand encoding က နှင့် transcoding; စာတန်းထိုး; ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း, ဖြန့်ဝေခြင်း, တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်; အဖြစ်တစ်ခုလုံးကို၏အလိုအလျောက်နှင့် orchestration လုပ်ငန်းအသွားအလာ. Telestream ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်တည်ရှိနေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.telestream.net.
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ 2014-11-24
ယခင်: အဆင့်မြင့်စနစ်များ Group မှအခမဲ့နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစဉ်အတွင်းရီးရဲလ်အချိန် 4K ထုတ်လုပ်မှုစူးစမ်း
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့်စနစ်များနိုင်ငံတကာအထွေထွေ Media Group သို့မော်လ်ဒိုဗာများအတွက် Snell ထုတ်လုပ်မှု switching နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများရွေးချယ်